Nandalo vetivety fa namela dindo maharitra ny mpitandrina Rakotoharintsifa – FJKM Ambavahadimitafo Nandalo vetivety fa namela dindo maharitra ny mpitandrina Rakotoharintsifa |
Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
Nandalo vetivety fa namela dindo maharitra ny mpitandrina Rakotoharintsifa
Publié le 12 avril 2011 à 09:04
MARTURIA VAVOLOMBELONA : Nandalo vetivety fa namela dindo maharitra !
Ny Talata 22 Desambra 2009 no nandao ny fanompoany tety an-tany Atoa RAKOTOHARINTSIFA Andrianjatovo. Mpitandrina ny FJKM Ambavahadimitafo izy izao nodimandry izao. Mpampianatra ao amin’ny Fakiolte Teolojika Ambatonakanga ( Testamenta Vaovao), sady Mpampianatra Sosiolojia momba ny Fivavahana eny amin’ny Oniversity Antananarivo. Ndriana no niantsoan’ny fianakaviany azy ary Tovo ho an’ny ivelany.
Fanokanana ho mpitandrina
Iray amin’ireo vitsy amin’ny Mpitandrina Malagasy to teny eran-tany izy, indrindra ny sehatry ny Testamenta Vaovao. Ary ny Fiangonana eto an-toerana dia nila hevitra taminy hatrany tamin’ny zavatra maro dia maro, satria dia olona manana fahaizana marolafy sady avo lenta ny lehilahy. Nahazo ny Doctorat en Théologie tao Lausanne Suisse izy ny taona 1996, ary laureate tamin’izany. Nanova ny fampianarana teolojia ny fisiany tao amin’ny Faculté noho ny fahaizana sy traikefa nananany.
Indreto aroso amintsika ny fijoroana ho vavolombelona ataon’ireo nifanerasera taminy:
RASENDRAHASINA Lala, Mpitandrina sady Filohan’ny FJKM: “Olona diso mahitsy loatra” amin’ny fitenenna izy, ary manana fahasahiana. Tsotra na malalaka loatra koa izy amin’ny fisehoana ivelany. Manakiana izy sady manome fanatsarana izay kianiny.
RAVALOMANANA Charlotte, Mpitandrina sady Sekretera akademika faculté de théologie: “tsy nahay nionona tamin’ny fikarohana hita izy, fa nikatsaka izany hatrany, indrindra ny fikarohana hita farany. Sarotiny amin’ny fanajana ny Soratra Masina izy, toy ireo biblistae maro. Nanamora ny asan’ny Faculté ny nananana azy tao.”
TEHINDRAZANARIVELO D. Emmanuel, Mpampianatra faculté: “olona tia boky tokoa izy, mianatra ary misokatra mihaino ny hafa. Rehefa voarany ny hevitrao, dia haveriny hiadiany hevitra aminao indray izany, fa tsy mionona amin’izay voarainy izy. Fikarohana ny tsara hatrany sy ny tsara indrindra izany toetrany izany.
RAKOTOVAO Andrianjaka, Mpitandrina nitaiza azy: nampianatra azy ho tia boky aho ary nilazany ny tenany taty aoriana ho “voalavo mihinam-boky”. Izy no nahatafita ireo zandriny 3 lahy, satria dia kamboty ray sy reny izy raha mpiomana ho mpitandrina: Ndriana (na Tovo). Ny fampianarana teny rosiana tao amin’ny Lycée Galliéni, no nandraisany karama tamin’izany.
RAMINO Paul, Mpitandrina, Mpampianatra azy: “Tamin’ny taona 1984 dia izaho no Mpampianatra voatendry hitarika azy tamin’ny asa fikarohana hahazoana ny mari-pahaizana Licence en Théologie, tao amin’ny Faculté Ambatonakanga: “L’avènement de Jésus-Christ selon Saint Paul”. Efa tsikaritro tamin’izany fa mpianatra ho lasan-davitra ity tovolahy ity. Ny zana-tohatra nodinganiny teo amin’ny fianarana sy fampianarana teolojia na teto Madagasikara na tany ivelany ary ny andraikitra notanany teto amin’ny FJKM, dia nanamarina izany”.
IRAKO ANDRIAMAHAZOSOA Ammi, Mpitandrina, Filohan’ny Synoda Lehibe roa farany: “Tamin’ny nitarihanay ny Synoda Lehibe, dia olona filan-kevitra mahatoky izy, saingy dia mpanitsy sady mahitsihitsy fiteny izay koa.”
RABEFIRENENA Velotiana, Mpitandrina vao nivoaka: “olona manam-panahy sy fahalalana izy, miezaka hatrany ny hitomboan’ny hafa amin’ny fahalalana ny Soratra Masina. Olona fakan-tahaka izy amin’ny fiezahana amin’ny fampitomboana ny tena sy ny hafa”.
MARTURIA VAVOLOMBELONA – 14 Janoary 2010
22/05/2022 A la une . Fanompoam-pivavahana . Toriteny
Mandehana araka ny Fanahy, dia tsy hahatanteraka ny filan’ny nofo ianareo
Alahady 22 mey 2022, andinihina ny lohahevitra hoe « Manavao ny Fanahy masina« , ka nitondran’ny tarika Ny mpitory toriteny an-kira araka ny Galatiana 5 : 16 – 25 « 16Fa hoy izaho: Mandehana araka ny Fanahy, dia tsy hahatanteraka ny filan’ny nofo ianareo. 17Fa ny nofo manohitra ny Fanahy, ary ny Fanahy manohitra ny nofo; ary mifanohitra
15/05/2022 A la une . Fanompoam-pivavahana . Toriteny
Ka efa nofenoiny fanahin’Andriamanitra, dia fahendrena sy fahiratan-tsaina sy fahalalana ny amin’ny tao-zavatra samy hafa
Alahady 15 mey 2022, « Manavao ny fanahy masina », lohahevitra amin’ity volana ity eto anivon’ny FJKM , itondrana am-bavaka ny mpiasa hiombonana. Ny mpitandrina Randrianarisoa Alain no nitondra ny hafatr’Andriamanitra avy ao amin’ny Eksodosy 35 : 31 « ka efa nofenoiny fanahin’Andriamanitra, dia fahendrena sy fahiratan-tsaina sy fahalalana ny amin’ny tao-zavatra samy hafa« . Andeha hiombona amin’ny fanompoam-pivavahana
08/05/2022 A la une . Fanompoam-pivavahana . SLK . Toriteny
Toriteny an-kira nentin’ny tarika Laurent Rakotomamonjy, faha-15 taona SLK Ambavahadimitafo
Alahady 08 Mey 2022, alahady hitondrana am-bavaka ny SLK na Sampana Lehilahy Kristiana eo anivon’ny FJKM, ankalazana ny faha-15 taonan’ny SLK eto amin’ny FJKM Ambavahadimitafo. Ny tarika Laurent Rakotomamonjy no nitondra ny hafatr’Andriamanitra tamin’ny alàlan’ny toriteny an-kira. Manasa anao hiombona amin’izany fanompoam-pivavahana izany :
03/05/2022 A la une . Fanompoam-pivavahana . Jobily 25 taona Past. Alain Randrianarisoa . Randrianarisoa Alain . Toriteny
Alahady fanokafana ny faha-25 taona nitandremana
Alahady 02 mey 2022 hibanjinan’ny FJKM ny lohahevitra amin’ity volana ity manao hoe « Manavao ny Fanahy Masina« ; nanokafana ihany koa ny Jobily faha-25 taona nitandreman »ny mpitandrina Randrianarisoa Alain. Ny teny anorenana ny jobily dia ny Salamo 111 : 1b « Haleloia ! Hidera an’i Jehovah amin’ny foko rehatra aho ». Manasa antsika hiombona amin’izany fanompoam-pivavahana izany :
24/04/2022 A la une . AFFA . Fanompoam-pivavahana . Toriteny
Alahady « Fetin’ny Fahazavana » 2022
Alahady 24 aprily 2022, alahady faha-2 manaraka ny paska, hitondrana am-bavaka ny Toeram-Pamonjena Zaza na TOPAZA, mbola anatin’ny lohahevitra hoe « Mandresy ny fahafatesana ny Tompo« . Nankalazaina anio ny « Fetin’ny Fahazavana » eto @ FJKM Ambavahadimitafo niompana tamin’ny lohahevitra hoe TVM na hoe « Tena Velona eo amin’ny fiainanao ve ny Mpamonjy« , nitondrana koa ny tenin’Andriamanitra avy ao
18/04/2022 A la une . Fanompoam-pivavahana . Toriteny
Fa isaorana anie Andriamanitra, Izay manome antsika ny fandresena amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Tompontsika
« Mandresy ny fahafatesana ny Tompo »; izany no lohahevitra banjinintsika amin’izao Paska 2022 izao. Ny tompo sy ny fiadanany anie ho amintsika rehetra ka hahatonga antsika hiombom-pandresena amin’ny Tompo Andriamanintsika. Ny mpitandrina Randrianarisoa Alain no nitondra ny hafatr’Andriamanitra avy ao amin’ny IKor 15 : 54 – 58 teto amin’ny FJKM Ambavahadimitafo tamin’ity Alahady paska 17 Aprily
10/04/2022 A la une . Fanompoam-pivavahana . Toriteny
Ilay fanomezana tsara indrindra
Alahady 10 aprily 2022, alahadin’ny sampan-drofia, natokana koa hitondrana am-bavaka koa ny Sampana Dorkasy. Avy ao amin’ny Romana 8 : 31 – 39 no nitondrana ny hafatra ho antsika anio : 31Inona ary no holazaintsika ny amin’izany zavatra izany? Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no hahatohitra antsika? 32Izay tsy niaro ny Zanani-lahy, fa natolony
03/04/2022 A la une . Fanompoam-pivavahana . Toriteny
Hohelohiny ho faty Izy, ary amin’ny andro fahatelo dia hatsangana indray Izy
Alahady 03 aprily 2022, andinihina lohahevitra vaovao eto amin’ny sahan’ny FJKM mandritra ity volana Aprily ity : « Mandresy ny fahafatesana ny Tompo« . Ny mpitandrina Randrianarisoa Alain no nitondra ny tenin’Andriamanitra avy ao amin’ny Matio 20 : 18 – 19 « ary ny Zanak’olona hatolotra ho amin’ireo lohan’ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna, dia hohelohiny ho faty Izy 19[…]
27/03/2022 A la une . Fanompoam-pivavahana . Toriteny
Hamaly ny olona araka ny nataony Andriamanitra
Alahady 27 martsa 2022, andinihina farany ny lohahevitra hoe « Mamaly ny faharatsiana ny Tompo« . Ny mpitandrina miza-draharaha Randriambinintsoa Onja no nitondra ny hafatr’Andriamanitra avy ao amin’ny Jeremia 21 : 1-10 « 1IZAO no teny tonga tamin’i Jeremia avy tamin’i Jehovah, fony Zedekia mpanjaka naniraka an’i Pasora, zanak’i Malgia, sy Zefania, zanak’i Mahaseia mpisorona, hankany aminy hanao
13/03/2022 A la une . Fanompoam-pivavahana . Fifohazana . Toriteny
Tanteraho ny fanompoanao – faha-30 taona SAFIF
Alahady 13 martsa 2022, nankalazana ny faha-30 taonan’ny Sampana Fifohazana eto amin’ny FJKM Ambavahadimitafo, izay nitoriana ny tenin’Andriamanitra sady fanevan’izao fankalazana izao : « Fa asany isika, voaforona tao amin’ny Kristy Jesoa mba hanao asa tsara…. Tanteraho ny fanompoanao ». Ramatoa Razafiarisoa Voahirana, Biraon’ny Fifohazana Synodam-paritany Antananarivo Atsinana no nitarika ny fotoam-pivavahana, ary ny mpitandrina Ranomenjanahary Solofo
Tsiahy FJKM Ambavahadimitafo
Ireo andrarezin’ny fiangonana protestanta malagasy
Ankizy sy zatovo
Asa Fitoriana Filazantsara Ankizy sy zatovo (AFFA)
Sampana Mpanazava sy Tily (SAMPATI)
Sampana Tanora Kristiana (STK)
Sekolin’ny Tenin’Andriamanitra (STA)
Volana sy Kintana (VSK)
Antoko Mpihira Ambavahadimitafo (AMA)
Midera an’Andriamanitra ny Sampana Fifohazana Ambavahadimitafo (MIASAFIA)
Sampana, asa, sampan’asa
Diakona sy Loholona
Tetik’asa mendrika (vokovoko manga)
Fandraisan-tànana Past. Randrianarisoa Alain
Ezaka trano fidiovana
Jobily 150 taona
Fandraisan-tànana Past. Rakotoniera Eric
Faha-10 taona : 1996 – 2006
Vaomiera asa sosialy
Rakotoniera Christian Eric
"Ary hoy Izy taminy: Mandehana any amin'izao tontolo izao hianareo; ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, Marka 16:15
FJKM Ambavahadimitafo 2020